‘भाइरल भिडियो’ ले यो के गर्यो? खिच्ने सुशीलासँग संवाद (भिडियो)
HOME » ‘भाइरल भिडियो’ ले यो के गर्यो? खिच्ने सुशीलासँग संवाद (भिडियो)
काठमाडौं। सामाखुसीमा बालिका डुबेको भिडियो भाइरल भएसँगै यो भिडियो कसरी क्यामेरामा कैद भयो भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ । त्यस्तो खतरनाक क्षणको भिडियो योजनाबद्ध तरिकाले खिच्न सम्भव थिएन तर मोवाईल क्यामेरामा भिडियो कैद भयो र त्यसले हंगामा मच्चियो ।
सामाखुसीकी कलेज छात्रा सुशीला थापा मगर जसले त्यो भिडियो खिचेकी थिइन्, यतिबेला उनी पीडा र खुसी दुबै महसुस गर्दैछिन् ।
भिडियोको विषयमा प्रश्न उठेसँगै सुशीलाले प्रस्ट्याएकी छिन् – ‘त्यो दिन सडकको दृश्य दर्दनाक थियो, हामी निकै पहिले देखि नै सडकमा हेरिरहेका थियौं र दृश्यहरु पनि खिचेका थियौं।’ उनले थपिन्– ‘मेरो कलेजको बस आउने बेलाको दृश्य खिच्ने योजनामा मैले सडकतिर मोवाईल सोझ्याएँ । भिडियो खिचिरहेकै बेलामा संयोगले त्यो दृश्य पर्यो, म चार तला माथि थिएँ, रुने र चिच्याउने बाहेक मेरो केही उपाय थिएन ।’
काठमाडौंको सडकले निल्यो बालिका, हिँड्दाहिँड्दै सडकमै गायब (भाइरल भिडियो)
सामाखुसीको नालीमा बगेकी सत्यासँग कुराकानी- पत्रकार बन्ने सपना (भिडियो संवाद)
घर फर्किदै गरेकी बालिकालाई ढलले निल्यो, सत्याको भने सकुशल उद्धार
सुशीलालाई भिडियो सामाजिक संजालमा राख्ने मन थिएन । भन्छिन् – ‘कसैले सडकको वास्ता त गरेको छैन, राखिदिउँ, सबैलाई थाहा हुन्छ भनेर दाइले भिडियो राख्नु भयो,’ उनी थप्छिन् ‘त्यो भिडियोले यति धेरै चर्चा पाउला भनेर मैले सोँचेकी थिइन् ।’ भिडियो सामाजिक संजालमा शेयर भएपछि तत्कालै भाइरल बन्यो । त्यो दृश्य सम्झिँदा अहिले पनि सुशीलाको मुटु काँप्छ ।
भिडियो बाहिर नआएको भए त्यो घटना सामान्य हुन्थ्यो । भिडियोले काठमाडौंको सडकको बेहाल अवस्था दर्शाउने मात्रै काम गरेन, सरोकारवालालाई चर्को दवाव दियो र बृहद बहसको विषय बन्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसम्मको ध्यान खिच्यो । सरोकारवालाहरु दवावमा परे ।
त्यो दिन सामाखुसीमा सडक जलमग्न थियो । सवारीहरु पानीको आहालमा ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । कहाँ सडक छ कहाँ खाल्डो वा ढल छ भन्ने पत्तो पाउनै मुस्किल थियो । घरको चौथो तलामा साथीसँग बसिरहेकी सुशीलाले जलमग्न सडकको भिडियो खिचेर ‘इन्स्टाग्राम’मा शेयर गर्ने सोच बनाइन् र भिडियो खिच्न थालिन् । उनले भिडियो खिच्दै गर्दा अचानक भिडियो फ्रेममा सत्या सडकमा हिँड्दै गरेको दृश्य आयो । अरु कोही नभएको ठाउँमा एक्लै पानीको आहालमा हिँड्दै गरेकी बालिका देखेपछि सुशीलाले फ्रेम त्यतै केन्द्रित गरिन् । त्यतिबेलासम्म उनलाई यतिसम्म ठूलो दुर्घटना होला भन्ने अनुमानसम्म थिएन । तर परेला झिम्किन पाएको थिएन ती बालिका सडकको खाल्डोमा परिन् र तत्कालै गायब भइन् । सुशीला दृश्य कैद गर्दै रुँदै चिच्याउँदै गरिन्। लगत्तै बालिका केही तल बग्दै गरेको अवस्थामा देखिइन् जहाँबाट उनलाई उद्धार गरियो ।
भिडियो भाइरल भएसँगै केही नकारात्मक कमेन्ट पनि आएका छन् । केहीले ‘उद्धार गर्न छाडेर भिडियो बनाएर बस्ने’ भन्दै सुशीलाको आलोचना गरेका छन् । यसले सुशीलालाई दुःख लागेको छ । भन्छिन् ‘छेवैमा भएका ट्राफिक प्रहरीले त केही गर्न सकेनन् म चौथो तलामा भएको मान्छेले के गर्न सक्नु?’
सुशीला नकारात्मक प्रतिक्रियाबाट दुःखी त छिन् तर ती बालिका सकुशल भएको खबरले खुसी पनि छिन् । उनलाई अर्को कुराले पनि खुसी लागेको छ । संयोगले नै सही उनले खिचेको भिडियोले सरकारकै ध्यान तानेको छ । सरोकारवालाहरुलाई जोखिमपूर्ण सडक तत्काल मर्मत गर्न दबाबको अवस्था सृजना गरेको छ । उनको चाहना छ यी जोखिमपूर्ण संरचनाको तत्काल मर्मत होस् ।
भिडियो खिचेकै कारण उनी चर्चामा त आइन् तर यस्ता घटनाका कारण चर्चामा आउनुले उनलाई खुसीभन्दा बढी दुःखी तुल्याएको छ । भन्छिन् ‘फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस् ।’
पत्रकार बन्ने इच्छा छ सत्या सापकोटाको